Nelson Mandela, dike anyị? - Afrikhepri Foundation
Tuesday, Eprel 13, 2021
IE nwere nkwenkwe ụfọdụ banyere nwoke a. Onye ọ bụla hụrụ ya n'anya na onye ọ bụla hụrụ ya n'anya. Ikwesighi ịjụ ajụjụ, naanị ị ga-ahụ ya n'anya. Ọ bụ ọchịchị aka ike nke ịhụnanya n'ebe ọ nọ na ịjụ ihe ndekọ ya bụ nkwulu. Onye ndu nke ANC, onye ndu otu na-emegide ịkpa oke agbụrụ, o duuru South Africa na nha anya maka ụmụ amaala ya niile. Ọ bụrụ na enweghị ajụjụ nke ịjụ ajụjụ maka uru ndị isi ojii na South Africa nwere, ihe ndekọ Nelson Mandela dịkarịsịrị karịa ihe anyị duziri.
Ọ bụrụ na m ghọtara ihe ọ bụla n'ụzọ ziri ezi kemgbe m lere anya na akụkọ ahụ, ọ bụ na ọdịda anyanwụ anaghị amasị nwoke ojii ahụ na-arụ ọrụ maka onye ojii ahụ na mgbe enwere onye isi ojii ekele, fee ya ofufe , nke ndị ọdịda anyanwụ kwupụtara na nke a, anyị ga-amalite ịjụ ajụjụ. Anyị na-biputere ruturu si Malcolm X ebe a izu.
M na-ezere nwoke a ruo ogologo oge, n'ihi na otu West na-emeso ya dị ka onye nkwusa nke ịkpọasị. N'ileghachi anya n'ihe ọ na-eme, achọpụtara m na ọ bụ onye na-ahụ ụzọ nke ọma ma nwee oke ịhụnanya na nraranye maka ndị ya na Africa. Ọ bụ otu ihe ahụ ka Mandela?
Na ngwụcha nke apartheid, e nwere eziokwu na nkwekọrịta nkwekọrịta nke Archbishop Desmond Tutu na-eduzi, nke ụfọdụ ndị omempụ kachasị njọ megide ndị isi na-enweghị nsogbu. Otu okwu Onye isi ala PW Botha na-ekpughe. Nwoke a haputara mkpochapu ndi ojii dika okwu ya n’ebe ndi ulo oru ya nke anyi deputara ebe a gosiputara. Ebe ọ bụ na amaara na nwoke ojii ahụ ga-agbanye ntì nke ọzọ mgbe ọ bụla n'agbanyeghị ihe emere ya, ikpe ikpeghị ndị a.
Mgbe ahụ na ọkwa akụ na ụba, ụbọchị ole na ole gara aga, ezigara m ọnọdụ akụ na ụba nke kamites na mba a mana m zere ikwu maka ibu ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji lekwasị anya na azịza nke ọha mmadụ ga-eweta, yabụ anyị . Nyocha ndị e mere na-egosi na ndị ọcha bụ naanị 10% nke ndị bi na-ejide 90% nke akụnụba ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụ niile sitere n'okike, nke sitere na ọdịnala ọdịnala nke Africa, dị n'aka ndị ọcha ọcha. Mandela ewepụtaghị ndị na-egwupụta akụ wee kee akụ na ụba n'etiti mmadụ niile na ndị ọcha ka na-abawanye ọgaranya ebe ndị isi ojii na-adọkpụ ekwensu n'ọdụ.
Otu a ka ọ dịkwa maka ala ubi. Na 2008, ndị Europe ka nwe 95% na enweghị ezi nkesa dị ka Zimbabwe. Kedu nke nkesa nke ndị ojii mere ka mba Zimbabwe nweta mmachi akụ na ụba nke mere ka ọ daa na akụ na ụba na dike a nke nnwere onwe na ịkpa oke agbụrụ na ndị mgbasa ozi ọdịda anyanwụ na-emeso Onye isi ala Mugabe dị ka onye ọchịchị aka ike ọbara. Naanị n'ihi na ọ naghị agbada n'ihu ndị Europe.
Yabụ ma ọ bụ n'ọkwa ọrụ ugbo ma ọ bụ ụlọ ọrụ, nke akụ na ụba n'ozuzu ya, South Africa ka bụ mba nke ndị ọcha na ndị ọdịda anyanwụ nwere mmasị na ya. Nke a bụ ihe mere Mandela ji hụ ya n'anya ma mee ememme ya. South Africa bụ mkpuchi anụ ọcha. Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ojii na-enye anyị echiche nha anya mana mana ndị ọcha na-achịkwa ihe niile. Nkwubi okwu m bụ na ọ bụrụ na anyị ji Mandela ekele na-enweghị ngwụcha maka ịhapụ agbụ anụ ahụ nke ndị ya, anyị ga-amarịrị na akụ na ụba ọ rụbeghị ọtụtụ ihe maka ya.
Ekwesịrị ime ka ndị isi anyị niile mata ọnọdụ nke anyị. Anyi choro uzo ihe omuma (ihe nlere nke Sheikh Anta Diop) iji tulee omume ha ma ghara ikwe ka anyi kwuputa onye anyi ga-ahu n’anya na onye anyi ga-asi.
AHỤ: Akụkọ banyere Africa
Freebụla onwe gị abụghị naanị iwepụ ụdọ gị
5 ọhụrụ site na .19,91 XNUMX
9 ejiri site na € 15,73
Zụta € 22,90
Emelitere ikpeazụ na Eprel 13, 2021 1:01
Lelee Malcom x (1993)
Unitydị n'otu nke mmụọ nke ojii ojii nke Africa: cosmogonies nke Somalia na Oromo